www.camaloow.com - News: War dag dag ah:---Puntland Oo Sheegatay in Ay Guul Ka Gaartay Dagaalka Maanta ee Gaalkacyoâ€¦......................
December 10 2018 03:51:42
War dag dag ah:---Puntland Oo Sheegatay in Ay Guul Ka Gaartay Dagaalka Maanta ee Gaalkacyoâ€¦......................
<?php </a> Aroortii hore ee maanta ayaa dagaal aad u culus ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gaar ahaan banaanka magaalada meel uga beegan Koonfur Galbeed. Puntland ayaa ku eedeysey in Galmudug weerarka soo qaadey, sidaas si lamid ah ayaana Galmudug ugu edeysey Dagaalka ayaa ka dhacay ugu yaraan saddex aag, waxaana wararkii u danbeeyey sheegayaan in ciidamada Puntland la wareegeen fariisimihii ciidamada Galmudug uga soo duuleen.
Sarkaal ka tirsan ciidanka Puntland oo lagu magacaabo Col. Maxamuud oo Horseed la hadley ayaa sheegay in dagaalkii maanta uu ka duwanaa kuwii hore kana cuslaa, wuxuu sheegay in ay hadda ku sugan yihiin laba aag oo kamid ahaa kuwii Galmudug uga soo duuli jirtey, dhamaan inta badan laamiga Koonfur u baxa ayuu sheegay in ciidanka Puntland ay isku ballaariyeen dibna aysan u noqonayn. Wuxuu sheegay in ay ku sugan yihiin Ceel Aakhwaan iyo Tuulo Xaaraam oo ahayd goobaha looga soo duuli jirey sda uu sheegay. Kbhasaaraha soo gaarey ayuu sheegay in dagaalka ay uga geeriyoodeen 8 askeri dhaawacna uu jiro, dhanka Galmudug ayuu sheegay in aysan war badan ka hayn ayse arkeen meydad badan oo ay ka tageen ciidanka Galmudug, waxaana socda tirakoobka dhimashada dagaalka ka dhacdey ayuu yiri.
Ciidamka Galmudug ayaa hadda ku sugan dhanka Bari ee Magaalada Gaalkacyo, taas oo ka fog meel ay magaalada uga soo ridi karaan Hoobiyaasha, waxaana ay isaga soo baxeen dhamaan dhanka Galbeed ee laamiga oo hadda ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland Laba war-saxaafadeed oo ka soo kala baxay Puntland iyo Galmudug ayaa midba kan kale ku eedeeyey jebinta heshiiskii Abu dhabi.
· hiiraan on November 06 2016 · 0 Comments · 72936 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,900,661 unique visits